Ra ho an'ny vampira amin'ny Halloween - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Ra ho an'ny vampira amin'ny Halloween
menaka31 minitraOlona 3125 kaloria
Tsy misy vato
ny Mayra Fernandez Joglar
Tonga ny Halloween ary izao no fotoana hiomanana ireo fomba fanamboarana tany am-boalohany sy mampatahotra indrindra amin'ny taona. Tamin'ity taona ity aho dia nanapa-kevitra ny amin'ny ra vampira tsotra sy tena manintona.
Ity recipe ity dia mety tsara amin'ny fanomanana azy sakafo hariva misy lohahevitra izay tsy maintsy arosonao ny fomba fahandro mamy sy mamy. Tsotra ny atao ary ao anatin'ny 30 minitra eo ho eo dia hanana lasopy voatabia ianao lisitra ho an'ny vahiny.
Ny zavatra tsara iray hafa momba ity recipe ity dia ny ahafahanao manompo azy kaontenera manokana ho an'ny fotoana. Azonao atao ny mampiasa fantsom-panadinana siantifika adala, vilany mpamosavy na fantsona fitsapana toy ny eo amin'ny sary.
1 Ra ho an'ny vampira amin'ny Halloween
2 Te-hahafantatra bebe kokoa momba ity fomba fanamboarana ra ho an'ny vampira ity ve ianao?
Amin'ity fomba ity dia ho voky sy voky tsara ny vampira ao amin'ny antokontsika.
Fotoana hiketrehana: 31M
Fotoana manontolo: 31M
Tongolo 50 g
menaka oliva 20 g
1 sotrokely (habe volontsôkôlà) tapa-tsakay (tsy voatery)
1 400g ny voatabia voapoizina
300 g voatabia voatabia
200 g ny ron-kena legioma
Apetraho ao anaty vera ny fennel madio sy ny tongolo voapoizina ary ny tongolo gasy efa nopotehina sy nopotehina kely. Manaikitra izahay mandritra ny 5 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampidininay ireo tapa-kazo mipetaka amin'ny rindrin'ny fitaratra mankany amin'ny lelany.
Ampidirinay ny menaka sy ny sakay. Manao fandaharana izahay 5 minitra, 120º, hafainganam-pandeha 1.
Mandritra izany fotoana izany, manondraka ny voatabia izahay, mitahiry ny rano izay hampiasainay ihany koa.
Avy eo, ampio ny voatabia voatazona ao anaty vera ary mahandro azy ireo 5 minitra, 120º, hafainganam-pandeha 1.
Avy eo dia arotsakay ny ranon'ny voatabia, ny ranom-boankazo ary ny ron-kena. Ahitsio sira sy dipoavatra ary andrahoy 20 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Aorian'ny fotoana dia manondraka 1 minitra, hafainganam-pandeha 10.
Asio ranom-boasary makirana tsara ary amboary ny sira sy dipoavatra.
Avelantsika hampangatsiaka kely ny lasopy voatabiha ary fenoy fantsona maromaro sy fantsona fitiliana.
Te-hahafantatra bebe kokoa momba ity fomba fanamboarana ra ho an'ny vampira ity ve ianao?
Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia mbola a lasopy voatabia miaraka amin'ny fikasihana manokana.
El fennel Manome naoty mahafinaritra izy io izay mitambatra tsara amin'ny akora hafa.
Ary ny sakay flakes Omeny teboka masiaka mahafinaritra izy ireo, izany hoe somary falifaly fa tsy mirehitra. Na izany na tsy izany dia efa fantatrao fa azo ampiasaina amin'ny tianao io akora io.
Tsarovy fa raha amin'ny fety na amin'ny sakafo hariva dia misy ankizy latsaky ny 4 na 5 taona Tsy maintsy esorina ny sakay satria tsy ny ankizy rehetra no zatra ireo tsiro ireo.
Ny fomba fahandro dia vegan ary mety ho an'ny celiacs na tsy mahazaka gluten, atody, lactose ary voanjo. Tsy ampy 150 kcal koa izy io ka tsara ho antsika ny fihinanana sakafo voalanjalanja.
Azo atao izany tehirizo ao anaty vata fampangatsiahana 3 na 4 andro farafahatarany raha mbola ao anaty vata fampangatsiahana. Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny habetsahan'ny lasopy ny fitoeran-javatra mba tsy hisian'ny rivotra be loatra. Amin'izany fomba izany dia ho voatahiry tsara kokoa.
Fanazavana fanampiny - Hevitra tsy mety diso 9 ho an'ny Halloween
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Halloween, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Tsotra » Ra ho an'ny vampira amin'ny Halloween
Vary misy ronono soja
Black Friday amin'ny vokatra an-dakozia sy ny maro hafa!